Sida loo bilaabi doon ahayn a | Career khayraadka ka USAHello | USAHello
Sar- yihiin ururada caawiya dadka iyo sababaha. Read ku saabsan sidii aad u bilaabi doon ahayn oo kaa caawin bulshadaada.
Weligaa mala yaabtay sida ay u bilaabi doon - barnaamij ama urur yar si ay u caawiyaan aad bulshada? Waa kuwan tallaabooyinku qaar ka mid ah oo aad qaadi karto si aad u ogaato dhibaatada ka jirta bulshada, xal u heli, iyo soo qaado fikrad inay nolosha. Sar- waxaa sidoo kale loo yaqaannaa “hay'adaha samafalka.”
Qaxootiga iyo doolku waxay leeyihiin baahida gaarka ah waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad wax ka qabato. Laakiin ka hor inta aad barato sidii aad u bilaabi doon ahayn oo ka caawiya, taxadar leh u hubi inay arkaan wixii adeegyo kale waxaa laga heli karaa. Mararka qaarkood ururka doon ahayn oo kaa caawin kara hore u jirta!
1. Raadi baahida loo qabo in bulshada
Ujeedadu waxay bilaabo of xalinta dhibaato kasta waa in aad ka warhayso dhibaatada. Sida aad ka fikirto sidii aad u bilaabi doon ahayn a, waxa jira arrimo ama u baahan yahay waxaad arki in aad bulshada? Ma aragtaa ardayda tagtey dugsiga ama fasalada ku guuldareysteen? Waxaad arki kartaa in ay jirto baahi ah in ay caawiyaan dadka cusub dadka waaweyn shaqooyin ka heli. Waxaad bilaabi kartaa fikirka ku saabsan xalka mar aad ka heli dhibaatada iyo ogaado sida aad u caawin karto.
2. Dooro iyo diiwaan magac
Marka aad go'aansato in aad habayso doon ahayn, waa in aad la timaado magaca uu ku tilmaamay. Waxaad dooran kartaa magac oo qeexaya waxa aan macaash ku sameeya ama kuwa u adeegto. sar- Qaar ka mid ah isticmaalaan oo kaliya ay leeyihiin eray keliya in ay tahay fikrad. Hubi in magaca aan la isticmaalin ka hor. Waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto Xafiiska Xoghayaha Gobolka. Gobol kasta wuxuu leeyahay mid ka mid ah xafiisyada kuwan. Si aad u diiwaangeliso magaca, waxaad yeelan doontaa in ay bixiyaan lacag yar oo ay fayl dokumanti loo yaqaan “articles of Iskudarka.”
3. Dalbo ah cashuur dhaaf IRS
doon ahayn ka dhigan tahay ma lacag samaynta. Sar- codsan kartaa in aadan bixin canshuurta on dakhliga. Waa in aad caddeysaa in aad aan la lacag samaynta by buuxinta foomamka. Adeegga Dakhliga Gudaha ayaa ka dhici doona dib u eegis of foomamka. Haddii ay kula tahay in aad u qalanto, waxaad heli doontaa 501(c)(3) status.
4. Qor qorshe ganacsi
Waxaad u baahan doontaa qorshe ganacsi, inkastoo aanad bilaabin ganacsi! Tani waa tallaabo muhiim ah sidii aad u bilaabi doon ahayn a. Haddii aan qorshe ganacsi, aadan haysan dareen cad oo ah tallaabooyinka aad u baahan tahay in ay qaataan, lacag aad u baahan tahay si kor loogu qaado, iyo sida aad ku gaari doonaa gool.
5. Daraan aad doon ahayn
Marka aad ka helay maqaal ee aan macaash samayn, waxaad dooran kartaa in ay ku daraan. Tani waxay ku siin doonaa qaab-dhismeedka guddiga aaminaadaada dheeraad ah si ay barnaamijyada iyo adeegyada aad. Diiwaan gelintii iyo khidmadaha kala duwan yihiin gobolka. Iskudarka diiwaan aad doon ahayn, laakiin ma uusan u dhigi 501(c)(3) reeban.
6. Dhis guddiga
guddiga A waa koox dad ah in go'aannada ku saabsan ururka. Waxay waxaa inta badan laguma siiyo shaqada this. Waxay kaa caawin go'aan ka gaarto waxa mashaariic ururka ayaa ka shaqaynaysa. Waxay sidoo kale kaa caawin lacag iyo u sheeg dad kale oo ku saabsan ururka. Isagoo dadkii saarnaa ee da'doodu kala duwan tahay, jinsiyadaha, iyo xirfadaha keenaya fikrado cusub.
7. In la sameeyo miisaaniyad
Lacag intee le'eg ayaad u baahan tahay si aad u bilowdaan doon ahayn? Go'aanso haddii aad rabto in aad kiraysato xafiis iyo haddii aad rabto in aad u kireeyo qof oo kale in ay ku caawiyaan. Qaado waqti aad ku qor baxay qalabka aad u baahan tahay. Ka fikir sahay iyo gaadiid. Waxaa laga yaabaa in waxyaabo aad amaahan kartaa, gorgortama, ama aad ugu deeqay ka tirsan beesha.
8. Gaarsiinta bulshada si aad u hesho taageero
Mar kasta oo aad hadaf bulshada, waxaad u baahan doontaa taageero. Connect la bulshadaada si aad u hesho dadka xaq iyo ururada kale si ay u taageeraan fikradaada. Liiska dadka muhiimka ah iyo ururada, oo waxaad ku tidhaahdaa ku saabsan qorshayaashaada. maktabadaha, ururada aan faa'iido-, iyo xarumaha dib u dejinta jira meelo badan oo dhan si ay u soo xiriir. Tusaale ahaan, haddii aad fikrad waa in ay leeyihiin dadka dhallinyarada ah ciyaaro kubada kolayga dugsiga ka dib, waayeen aad lamaanahaaga kula xarunta bulshada iyo tababarayaasha qaar ka mid ah.
Sidee loo agaasimo doon fulinta
Sida loo sameeyo ganacsi
macluumaad cashuurta ururada samafalka IRS
Sidee baan u qori qorshe ganacsi?
khayraadka doon ahayn ka NOLO
Sidee in ay ku daraan aad doon ahayn
Subscribe to our Warside
Hel cusbooneysiin oo ay bartaan oo ku saabsan horumarka cusub in aad saamayn ku yeelan kara.